Izindaba - Njengamanje, ibhethri le-lithium battery kanye ne-energy storage lithium battery zibaluleke kakhulu embonini.
Njengamanje, ukusetshenziswa kobuchwepheshe be-lithium battery kwisitoreji samandla kugxila kakhulu emikhakheni yokuphakelwa kwamandla kagesi e-grid base station, uhlelo lokugcina izinto ekhaya, izimoto zikagesi neziteshi zokushaja, amathuluzi kagesi, imishini yehhovisi lasekhaya neminye imikhakha. Ngesikhathi sohlelo lweminyaka eyisi-13 lweMinyaka Emihlanu, imakethe yokugcina amandla eChina izohola emkhakheni wezinsiza zomphakathi, ngokungena kusuka ohlangothini lokuphehla ugesi kanye nogesi wokudlulisela ohlangothini lomsebenzisi. Ngokuya ngemininingwane, ivolumu yesicelo semakethe yokugcina amandla ebhetri ye-lithium ngo-2017 ibicishe ibe yi-5.8gwh, kanti isabelo semakethe sebhethri le-lithium-ion sizoqhubeka nokukhuphuka unyaka nonyaka ku-2018.
Ngokuya ngezimo zohlelo lokusebenza, amabhethri e-lithium-ion angahlukaniswa abe ukusetshenziswa, amandla namandla okugcina. Njengamanje, ibhethri lamandla we-lithium nebhethri yokugcina i-lithium libaluleke kakhulu embonini. Ngokwesibikezelo sochwepheshe abanegunya, isilinganiso samandla ebhethri kuzo zonke izinhlelo zebhethri ye-lithium eChina kulindeleke ukuthi sikhuphuke sifike kuma-70% ngo-2020, futhi ibhethri lamandla lizoba ngamandla amakhulu ebhethri le-lithium. I-Power lithium battery izoba ngamandla amakhulu ebhethri le-lithium
Ukuthuthuka okusheshayo komkhakha webhethri we-lithium ikakhulukazi kungenxa yenqubomgomo ekhuthaza ukuthuthukiswa kwemboni yezimoto ezintsha zamandla. Ngo-Ephreli 2017, uMnyango Wezimboni Nobuchwepheshe Bezokwazisa BaseRiphabhulikhi Yabantu baseChina wabuye wakhuluma ohlelweni lwakamuva "lwentuthuko yesikhathi esiphakathi nesikhathi eside somkhakha wezimoto" ukuthi ukukhiqizwa nokuthengiswa kwezimoto ezintsha zamandla kufanele kufinyelele ezigidini ezi-2 ngo-2020, futhi ukuthi izimoto ezintsha zamandla kufanele zibike ngaphezu kuka-20% wokukhiqizwa kwezimoto nokuthengiswa ngonyaka ka-2025. Kungabonakala ukuthi amandla amasha nokonga amandla aluhlaza kanye nezinye izimboni zokuvikela imvelo kuzoba izimboni eziyinsika zomphakathi ezibalulekile esikhathini esizayo.
Esimeni esizayo sobuchwepheshe bamandla webhethri, i-ternary iba umkhuba omkhulu. Uma kuqhathaniswa ne-lithium cobalt oxide, i-lithium iron phosphate namabhethri e-lithium manganese dioxide, i-ternary lithium battery inezici zamandla amakhulu, ipulatifomu ephezulu yamandla, ubukhulu bamapompo aphezulu, ukusebenza kahle komjikelezo, ukuqina kwe-electrochemical nokunye. Inezinzuzo ezisobala ekuthuthukiseni uhla lwezimoto ezintsha zamandla. Ngasikhathi sinye, ibuye ibe nezinzuzo zamandla aphezulu wokukhipha, ukusebenza okuhle kokushisa okuphansi, futhi ingakwazi ukuzivumelanisa nokushisa kwesimo sezulu sonke. Ezimotweni zikagesi, akungabazeki ukuthi abathengi abaningi bakhathazekile ngokukhuthazela nokuphepha kwayo, futhi ibhethri le-lithium-ion ngokusobala liyindlela engcono.
Ngokwanda okusheshayo kwesidingo semoto kagesi, isidingo samandla webhethri i-lithium-ion sikhule kakhulu, okube amandla amakhulu aqhuba ukukhula komkhakha webhethri we-lithium-ion. Ibhethri leLithium liwumkhiqizo onzima kakhulu. Izalwe ngeminyaka yama-1980s futhi ibhekane nesikhathi eside semvula kanye nobuchwepheshe obusha. Ngasikhathi sinye, noma ngabe inqubo yokukhiqiza noma yokucekela phansi yebhethri ye-lithium ayilimazi kangako imvelo, ehambisana kakhulu nezidingo zentuthuko yezenhlalo yamanje. Ngakho-ke, ibhethri le-lithium selibe yingqikithi yesizukulwane esisha samandla. Esikhathini esimaphakathi, ukuthuthukiswa kwamanje kwezobuchwepheshe bezokuthutha kungumgogodla wokuthuthukiswa kobuchwepheshe besicelo somhlaba jikelele. Njengomkhiqizo obalulekile osekelayo wokuthuthukiswa kobuchwepheshe bezokuthutha, ibhethri le-lithium yamandla kulindeleke ukuthi libe nentuthuko enkulu eminyakeni emi-3-5 ezayo.
Isikhathi Iposi: Sep-28-2020